The-aghaghị Ime Europe Ahụmahụ Site Train | Save A Train
Home > Travel Europe > The-aghaghị Ime Europe Ahụmahụ Site Train
Oge Ọgụgụ: 4 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 31/12/2019)
Europe is an incredible continent to inyocha! Na ọtụtụ ihe iji hụ, ime na-achọpụta, ọ bụ zuru okè n'ebe atụmatụ adịghị agwụ agwụ, Europe na-enweta ụgbọ okporo ígwè.
EUROPE ahụmahụ ụgbọ okporo ígwè – mBỤ Kwụsịnụ, London:
Ọzọ Europe ahụmahụ ụgbọ okporo ígwè ga-amalite na London! Ọ na-kwuru na “A ọjọọ ụbọchị na London bụ ka mma karịa a ụbọchị ọma n'ebe ọ bụla ọzọ.” Ya mere, ka na-amalite e! Onye zuru kwesịrị bụ Harry Potter Tour nke Warner Bros. studio ọbụna ma ọ bụrụ na ị bụghị a ibu-akwado. The technology, ụdị na n'azụ na-Mpaghara na-dị nnọọ ịtụnanya na-ọma kwesịrị ịhụ. On a spellbinding 6 hour njem, le mbụ tent dị ka Platform 9 ¾ na Diagon uzo warawara; ahụ Hogwarts Express uzuoku ụgbọ okporo; nọkwasi a broomstick ka nkedo, na-ekpughe na n'azụ na-Mpaghara nzuzo nke movies 'na ihuenyo wizardry. Nke a Harry Potter studio London tour agụnye njem okirikiri nchịkwa iga na ọnụ ụzọ tiketi Gụọ ihe banyere London Harry Potter Tour of Warner Bros. Studio na Admission Ebe a.
Paris: EKWU EE’ TO onye na-ese eserese unu Eserese
Your abịa Europe ahụmahụ ụgbọ okporo ígwè kwesịrị ịbụ Paris. Na Picasso oge, Montmartre bụ a bohemian paradise jupụtara tumadi na-aṅụ oghere na a hilltop milikuku ghọọ a raffish egwu ulo. taa, Ebe du Tertre na ndò nke Sacre Cœur jupụtara nke ndị nka onye ga-ngwa ngwa weghara gị oyiyi. emesia, gaa na ụwa kasị ama art studio, ụgbọ mmiri ahụ Lavoire, ebe Picasso na-ese na Braque, Juan gri, na Modigliani mgbe ojeghariri.
Ọrịrị UP n'ọkwá OF unu EUROPE ahụmahụ BY n'ụgbọ okporo ígwè na kpokọtara MONTJUIC:
Mgbe gị ụgbọ okporo ígwè njem si Paris, gị ọzọ Europe Ahụmahụ site Train kwesịrị Barcelona. ugbu a, tupu anyị ina malitere ka na-eme otú sị a ọtụtụ ndị na-mispronounced obodo. Ọtụtụ English ọkà okwu-anwa-ada ‘ọzọ Spanish‘ site n'ịkpọ onye 'c’ na Barcelona dị ka a 'nke’ na si 'Bar-na-na lona'. Ma na Catalan (asụsụ nke Catalonia, ebe Barcelona na-achọta), na 'c’ na-akpọ dị ka 's’ – otú 'Bar-up kwaaji’ bụ ezi pronunciation.
Ugbu a anyị nwere na si ụzọ, ka okwu Montjuïc ugwu. Nke a bụ zuru okè n'ebe maka a leafy stroll na ọmarịcha echiche. Jide n'aka na ị nwetara gị na-eje ije (ma ọ bụ na-agba ọsọ ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ) akpụkpọ ụkwụ na, dị ka ọ na-ewe a bit nke legwork na-ebili e, ma na nke a pụtara na ọ bụ obere jupụtara site ọzọ njem nleta. Wezụga eke gburugburu ma ikpọ vistas, ị ga-ahụ ụlọ si 1992 Olympic Games, gụnyere Palau Sant Jordi na telekomunikashions ụlọ elu e site Santiago Calatrava.
Prague: Kpagharịa n'akụkụ A ochie akwa mgbe anyanwụ dara
Prague a maara dị ka obi nke Europe. Nke a mara mma na dịtụ omimi obodo bụ a kwesịrị-ahụ na gị na Europe Ahụmahụ site Train njem. Narị afọ nke 14 Charles Bridge obe na Vltava River na oke nnukwu nke 1000-afọ nnukwu ụlọ eru n'azụ ya. fun eziokwu; ruo mgbe 1841, ọ bụ nanị ụzọ gafere osimiri si Old Town!
àjà akụkọ-akụkọ echiche, na-agafe agafe-na-gothic nkume akwa na-agbakọta na 30 akpụ nke nsọ na kacha mma gara n'oge mgbede mgbe anyanwụ na-mwube. ma ọ bụrụ na ị nọ ya na gị ịrịba ama ndị ọzọ, a na-eme maka a nnọọ ihunanya ọnọdụ.
Venice: Banye A GONDOLA!
Nke a nwere ike iyi cheesy, ma mgbe ị na-aga Venice, nọkwa a Gondola site na obodo bụ n'ezie a kwesịrị. E wezụga na fun na ihunanya, ọ bụ nakwa na ụzọ kasị mma na-ahụ obodo! The ụbọchị ahụ ga-akwụsị oyi site na ịga na nkecha Harry si Bar maka a ume ọhụrụ Bellini. Nke a bụ na-acha ọcha peach ihe ọṅụṅụ na prosecco, ebe mmanya echepụta site mmanya guzobere Iso.
Anyị Asia na Europe ahụmahụ ụgbọ okporo ígwè bụ ihe pụrụ iche Istanbul
Istanbul bụ ma ama maka Blue alakụba. Ezie na anyị na-eme nwere ike ikwu na nke a, we’d also like to draw your attention Istanbul is on the edge of Europe experiences by train, dị ka ya nso Asia karịa Europe.
Istanbul bụghị naanị na-adọrọ mmasị n'elu ala, mana ọzọkwa ala na nnukwu ụlọ ụka Senti n'Olulu (na nnukwu ụlọ ụka Senti). Nke a na-atọ mpempe Byzantine engineering bụ a ume-inweta ala olulu, ozugbo na-eweta mmiri ọṅụṅụ na aqueducts si ugbu a Bulgaria ka Istanbul. Na-eche na-ekpo ọkụ ìhè, na ụda nke adụ dripping mmiri tinyere oge gboo music ebre na ndabere. Azọ ụkwụ na walkways ma na-ekiri azụ igwu mmiri n'etiti 336 ogidi na-akwado ndị n'uko.
gaa SaveATrain.com ka akwụkwọ gị ọzọ ụgbọ okporo ígwè njem na 3 nkeji, na ọnụ ala ụgbọ okporo ígwè tiketi udu.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-experiences-by-train%2F- (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / ya / fr ma ọ bụ / nl na ndị ọzọ asụsụ.
traintip ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ Train Travel travelfrance travelitaly Njem toro toro